Masjid ay “asxaabtii nabiga dhiseen” oo lagu burburiyay dagaalkii Tigray | Berberanews.com
Home WARARKA Masjid ay “asxaabtii nabiga dhiseen” oo lagu burburiyay dagaalkii Tigray
Masjid ay “asxaabtii nabiga dhiseen” oo lagu burburiyay dagaalkii Tigray
Dowladda Itoobiya ayaa ballan qadaday in ay dib u dhiseyso masjid qarniyo jiray oo lagu waxyeelleeyay dagaalkii gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaas ku dhex maray milatariga federaalka iyo xoogagga TPLF.
Shan arrimood oo ku saabsan Tigray
1. Boqortooyadii la odhan jiray Aksum ayuu xarun u ahaa gobolka. Waxaa lagu qeexay boqortooyadaas in ay horseedday mid ka mid ah ilbaxnimadii ugu ballaarneyd ee ay gaareen dadkii hore. Boqortooyadaas ayaa ahayd tii ugu awoodda badneyd ee u dhaxeysay labadii boqotooyo ee Roman-ka iyo Faarisiinta.
2. Haraadigii magaalada Aksum waxay goob taariikhi ah oo la dalxiis tago u tahay Qaramada Midoobay. Goobtan ayaa lagu noolaan jiray intii u dhaxeysay qarniyadii 1-aad ilaa 13-aad ee taariikhda AD, waxaana ku yaalla qasriyo, qabuuro iyo kaniisado.
3. Inta badan dadka u dhashay qowmiyadda Tigray waa Itoobiyaanka heysta masiixyadda loo yaqaanno Orthodox. waxay heystaan. Gobolkaas waxay dadka masiixiyiinta ah joogeen 1,600 oo sano ka hor.
4. Luuqadda ugu weyn ee looga hadlo gobolka waa Tigrinya, taasoo ah lahjad ay si toos ah ugu wada xiriiraan ugu yaraan toddoba milyan oo ku kala nool caalamka.
Masjid ay "asxaabtii nabiga dhiseen" oo lagu burburiyay dagaalkii Tigray
Previous articleBayern Munich oo kabaha la dulmartay Mainz
Next articleTuuggii Caaqilka Ahaa Sheeko Kale:-WQ M Faarax Qoti